Ihe ise ị ga-eme kwa ụbọchị iji nwee ahụ ike | Bezzia
Susana Garcia | 06/04/2021 20:00 | Ndụmọdụ gbasara ahụike, Ahụike
Inwe ahụike mgbe ụfọdụ bụ ihe ọdịmma, n'ihi na mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ọtụtụ ihe ime ya, mana o metụtara ndụ anyị na-ebi na ihe niile anyị na-eme. Omume ọ bụla na omume ọ bụla na-emetụta ahụ anyị ma na-emetụta anyị, n'oge dị mkpirikpi ma ọ bụ ogologo oge, yabụ anyị ga-eburu n'uche na anyị ga-eme ụfọdụ ihe iji nwee ahụike ma na-eduga ndụ dị mma nke na-enye anyị ohere ịka nká na ezigbo ibi ndu.
Anyị ga ahụ Ihe ise ị kwesịrị ị na-eme kwa ụbọchị iji nwee ahụ ike n'ikpeazụ. Nke a bụ agbụrụ dị ogologo na mmegharị dị ukwuu nke site na otu ụbọchị ruo ụbọchị na-esote na-eme ka ọ dị gị mma karịa abaghị uru. Ikwesiri ime ihe iji mee ka ahụ dị gị mma. Kindsdị ihe ndị a bụ akụkụ nke ndụ gị ma bụrụ mmegharị kwa ụbọchị nke na-enye gị ohere ilekọta onwe gị.
1 Ezumike ezumike
2 Nri na-edozi ahụ
3 Na-eme egwuregwu kwa ụbọchị
4 Ụọ mmiri
5 Zere nchegbu
Iji gbakee kwa ụbọchị ma nwee ndụ dị mma, ọ dị ezigbo mkpa izu ike ka ahụ na uche gbakee. Nke a gosipụtara na ọ bụrụ na anyị anaghị ehi ụra nke ọma na ike gwụrụ anyị, deconcentrated na ike. Yabụ na ọ bụghị naanị maka ihi ụra ụfọdụ oge, kama na nke fọdụrụ bụ nke dị mma. Gbalịa ka ihe niile dị n’ime ụlọ ahụ dị mma izu ike. Zere ihu na ihu ma ghara itinye televishọn, n'ihi na nke a na-eme ka ị ghara ihi ụra nke ọma. Tinye ego na akwa akwa na-enyere gị aka izu ike ma buru n'uche ọnọdụ okpomọkụ nke ụlọ ahụ. Nwere ike inyere onwe gị aka na ihe ndị dị ka isi na-atọ ụtọ ma ọ bụ ụda na-enyere gị aka izu ike. Kwadebe oghere dị mkpa, ọ bụ ezie na ị ga-ezerekwa nri abalị buru ibu ma na-emega ahụ n'oge ụra, n'ihi na ọ ga-arụ ọrụ. Ọ bụrụ n ’ihe a niile ị gaghị ehi ụra nke ọma, ọ ga-adị mkpa ịkpọtụrụ onye ọkachamara.
Nri na-edozi ahụ
Anyị niile maara ihe nri kwesịrị ekwesị bụ. To ga-ewere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kwa ụbọchị, na mgbakwunye na izere nri ndị a gbanyere mkpọrọgwụ, ebe ọ bụ na ha kachasị emerụ ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụrụ ụfọdụ, ọ kwesịrị ịbụ naanị n'oge ma ọ bụghị kwa ụbọchị. Na ụbọchị ị ga-eri nri na nri dịgasị iche iche na-ezere nnu, abụba ma ọ bụ shuga. Ọ bụrụ n’ịmụta ịnụ ụtọ nri ndị ọzọ, ka oge na-aga, ọ gaghịzi adị mkpa ka ị rie nri nwere oke shuga ma ọ bụ abụba ma ị ga-ahụkwa ka ọ dị gị mma. Ezi nri na-enyere anyị aka inwe ezigbo eriri afọ, ịdị mma na mgbaze nke ọma.
Na-eme egwuregwu kwa ụbọchị
Ikekwe echela ka ịme egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ kwa ụbọchị, ma ị nwere ike imegharị ahụ kwa ụbọchị. Ọ dị mkpa ka ị na-emega ahụ ọ bụrụgodi na ị ga-eje ije na ezigbo ije, mee ụfọdụ omume iji gbatịa ma ọ bụ ike. Ihe dị mkpa abụghị ịnọdụ ala ụbọchị niile ma ọ bụ ime ihe ọ bụla, ebe ọ bụ na obere mmegharị ahụ na-agụta na njedebe ma na-enyere anyị aka ịdị mma. Gbalịa ịchọta ihe masịrị gị, mee egwuregwu dị iche iche ma nwee ọ themụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na anyị niile na-enwe mmasị ị drinksụ mmanya na-aba n’anya ma ọ bụ na ndị nwere mmanya na-aba n’anya, nke bụ eziokwu bụ na ahụike kachasị mma anyị nwere ike ị drinkụ bụ mmiri. Kingụ mmiri kwa ụbọchị dị ezigbo mkpa Ọfọn, ahụ anyị chọrọ ya. Nwere ike ịme infusions na-agbakwunye shuga, n'ihi na ha dịkwa mma, ma ọ bụ tinye lemon wedge na mmiri. Ihe ndị a niile na - enyere gị aka ị drinkụkwu mmiri ma nye ya ekpomeekpo.
N'ụwa taa nke a siri ike, mana ọ dị mkpa iwetulata nrụgide na-anaghị arụpụta ọrụ anyị nwere ma ọ bụ na anyị nwere ike ịrịa ọrịa. Na nrụgide bụ isi iyi nke nsogbu ya mere anyị kwesịrị ịmụta ịchịkwa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » 5 ihe ị ga-eme kwa ụbọchị iji nwee ahụ ike